I-Narcissos 'Nissi Beach' Ifulethi C12
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Andreas izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-NARCISSOS ‘NISSI BEACH’ Ifulethi C12 itholakala kalula enhliziyweni yendawo yaseNissi Beach e-Ayia Napa; amamitha angamakhulu amane ukusuka ehhotela elaziwayo iNissi Beach. Ifulethi lisesitezi sokuqala futhi linekhishi elinepulani elivulekile, indawo yokudlela nendawo yokuhlala. Inamagumbi okulala amabili amakhulu; enye inombhede wabantu ababili kanti enye inemibhede emibili yabantu abangashadile, yomibili enawodilophu amaningi futhi inendlu yokugezela enkulu.
Ifenisha ngokubukekayo futhi esanda kulungiswa, leli fulethi elingu-82m² elinamagumbi amabili okubhukuda elinechibi lokuhlangana line-air conditioning ngokugcwele futhi line-TV enesikrini esiyisicaba esinamashaneli esathelayithi, kanye ne-Wi-Fi YAMAHHALA yesivinini. Ikhanya futhi inefenisha yesimanje, enekhishi elihlome ngokuphelele, indawo yokudlela nezindawo zokuhlala. Kukhona umshini wokuwasha, ihhavini ye-microwave, umenzi wetiye/ikhofi, isomisi sezinwele, ibhokisi lediphozithi yokuphepha kanye nempahla yoku-ayina. I-balcony enefenisha ephelele, engu-32m² inombono omangalisayo wechibi lomphakathi elenza libe indawo ekahle yokujabulela ukudla.
Ifulethi litholakala enhliziyweni yendawo yaseNissi Beach e-Ayia Napa; amamitha angu-400 nje noma imizuzu emihlanu uhamba ngezinyawo ukusuka e-Nissi Beach edumile okungenye yamabhishi angcono kakhulu e-Cyprus Eastern Coast. Indawo ingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya emahhotela amaningi endawo yomshado ku-Nissi Avenue, ihhotela eliseduze i-Nissi Beach Holiday Resort. Umakhelwane waleli fulethi uthule futhi uziphumulele. Ibhilidi linekheshi futhi leli fulethi linikeza indawo yokupaka embozwe mahhala.
4.82 ·11 okushiwo abanye
4.82 · 11 okushiwo abanye
I-ATM - 2 min ukuhamba
Isikhungo sase-Ayia Napa - 2 km
Ichweba lase-Ayia Napa - 2 km
I-Ayia Napa Marina - 3 km
I-Ayia Thekla Beach - 3 km
Isitobhi sebhasi - 2 min ukuhamba
Grossery - 2 min ukuhamba
I-Konnos Beach - 9 km
Nissi Bay - 2 min ukuhamba
Ibhishi lase-Nıssı - 2 min ukuhamba ngezinyawo
Ikhemisi - 2 min ukuhamba
Isikhungo seProtaras - 10 km
I-Waterworld Water Park - 3 km